ब्यानर पोस्ट – Classic Khabar
Aug12021 by News makerNo Comments
नेकपा एमाले भित्रको विवाद समाधान नहुँदै माधव नेपाल पक्षका ४ नेता नेपाली काँग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष मन्त्री बनाउन माग गर्दै पुगेको खुलेको छ । मन्त्री पद माग्दै बालुवाटार पुगेका नेपाल पक्षका ४ नेतालाई देउवाले हुँदैन भनेर फर्काएका छन् । उनले माधव नेपालको स्वीकृती बिना आफुले एमालेका कसैलाई पनि मन्त्री नबनाउने जवाफ दिएका हुन् । नेकपा माओवादीको स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तो घटना भएको संकेत गरेका हुन् । देउवालाई विश्वासको मत दिने एमालेका ४ सांसदले मन्त्री बन्न भन्दै बालुवाटार पुगेका थिए । मन्त्री बन्न बालुवाटार पुगेका ती सांसदहरुले ‘सांसद पद गए जाओस्, मन्त्री बन्न’तयार छौं भन्दै देउवा समक्ष पुगेका थिए । तर उनीहरुको प्रस्ताव देउवाले अस्वीकार गरेको प्रचण्डले माओवादी बैठकमा सुनाएका छन् । साउन ३ गते राति माधव नेपालसहित २२ जना ए
Jul292021 by Classic KhabarNo Comments
आजै मन्त्रीमण्डललाई पुर्णता दिँदै देउवा, टुंगो लागेका मन्त्रीका नाम यस्तो छ
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आजै मन्त्रीमण्डललाई पुर्णता दिने भएका छन् । मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भेटवार्ता भएको छ।बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रचण्ड देउवालाई भेट्न गएका थिए । उनीहरुबीच भएको छलफलमा आजै सरकारलाई पूर्णता दिने सहमति भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ।देउवाले गत असार २९ गते प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन।बुधबार बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी र जसपालाई चाँडो सरकारमा सहभागी हुने नेताहरुको नाम दिन आग्रह गरेका थिए। काँग्रेसमा संस्थापनबाट सचेतक पुष्पा भुसाल, डा। नारायण खड्का, डा। डिला संग्रौला, देवेन्द्र कँडेल, बहादुर लामा, मानबहादुर विश्वकर्मासहितका नेताहरूले मन्त्रीका लागि दाबी गरेका छन् । यस्तै पौडेल
Jul272021 by Classic KhabarNo Comments
नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वमन्त्री गगन थापाले सभामुख र आफहरुको कर्मले संसद र संविधानाप्रति गुमेको जनविश्वासलाई पूनःस्थापित गनुृप्र्ने बताएका छन् । आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नेता थापाले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीतिर लक्षित गर्दै संसद्लाई हेप्ने र अदालतलाई हप्काउने, न विधि मान्ने, न विज्ञानलाई पत्याउने, स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पंगु बनाउने, जनताको दुहाई दिने, तर आसेपासे पोस्ने, बाहिर सिंहजस्तै गर्जने र भित्र लम्पसार पर्ने, यस्तै यस्तै परिचय बनाएर बालुवाटारबाट बार्दली पुगेको छ सरकार, जस्तो आफ्नो पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारले यस्तो कुनै अपराध गर्ने छुट नभएको बताएका छन् । उनले बैठकमा भनेका छन् , ‘यस्तो हुन नदिनको लागि संसद्ले पनि संकल्प गर्नुपर्छ । न त यो संसदलाई बेवास्ता गर्न दिईने, न त कामविहीन बनाउन । न त मनोमानी ढंगल
Jul252021 by Classic KhabarNo Comments
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाललाई माफी दिने म को हुँ? भनि प्रश्न गरेका छन् । उनी आफू ब्यक्तिले नभै आवश्यक भएमा कारवाही गर्ने वा माफी दिने निकाय पार्टी भएको बताएका छन् । पार्टी अनुशासनविपरीत गतिविधि गर्ने जोसुकैलाई पनि कारवाही र माफी आफूले नभइ पार्टीले गर्ने उनको भनाइ रहेको थियो । आइतबार अखिल नेपाल महिला संघको जारी पहिलो सचिवालय बैठकमा भर्चुअल सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले उक्त कुरा बताएका हुन् । केही दिनअघि माधव नेपालले महाराजधिराजबाट ‘माफी उवाच’ भएको भनी गरेको टिप्पणीप्रति जवाफ दिँदै अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताएका हुन् । अनुशासन विपरित गतिविधि गर्नेहरुलाई आफूले नभइ माफी दिए पार्टीले दिने समेत उनले स्पष्ट पारेका छन् । उनले एमाले एक जनाले बनाएको पार्टी नभएर सबैको बलिदानीवाट बनेको भएकाले पार्टी हितमा लाग्ने सबै अटाउने पनि बताए । उनले बैठकमा सम्बोधन गर्दै भने, त्यस्ता ब्यक्
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल बाहेकका अन्य नेताहरुलाई एकतामा आउन आग्रह गरेका छन् । उनले आफ्नै पार्टी विरुद्ध लाग्ने र प्रतिकृयावादीहरुसंग मिलेर षडयन्त्र गर्ने नेताका पछि नलाग्न समेत उनले आवग्रह गरे । एमालेकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अब उनले एकताको आग्रह नगर्ने पनि संकेत गरे । अखिल नेपाल महिला संघको सचिवालय बैठकलाई जुम मार्फत सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले भने, को हो पार्टी मलाई क्षमा दिने को हो कमिटी मलाई क्षमा दिने भन्ने जस्ता प्रतिकृयावादीहरुको पुच्छर भएर हिँडेर आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने त्यस्तालाई अब मैले आश र विश्वास गरेको छैन । देश र पार्टीलाई माया गर्नेहरुलाई भन्न चाहन्छु सबैलाई माफी हुनेछ । उनले एमाले एक जनाले बनाएको पार्टी नभएर सबैको बलिदानीवाट बनेको भएकाले पार्टी हितमा लाग्ने सबै अटाउने पनि बताए । उनले बैठकमा सम्बोधन गर्दै भने, त्यस्ता ब्यक्तिको पछि नलाग
नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि मन्त्रीपरिषद्ले पुर्णता पाएको छैन । गठबन्धनका पार्टीहरुको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्नु फलामको चिउरा चपाउनु बराबर भएको छ । आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई उनले भाग मिलाउन सकेका छैनन् । यता अन्य गठबन्धन दलहरुमा पनि यस्तै अवस्था छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले त आफु निकै ठूलो तनावमा रहेको बताएका छन् । माओवादी केन्द्रले सरकारमा जाने निर्णय गरिसकेको छ । पार्टीको निर्णयसंग मन्त्री बन्न चाहनेहरुको लिष्ट निकै लामो छ । केही दिन अघि एक नेताले मन्त्री नपाए देह त्याग गर्छौ भन्दै चेतावनी दिएको कुरा फेसवुकमा लेखेका थिए । शनिवार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि त्यस्तै अभिब्यक्ति दोहोर्याए । कम्युनिस्ट नेता नरबहादुर कर्माचार्यको ८ औँ स्मृति दिवसका अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफु निकै ठुलो समस्यामा
Jul242021 by Classic KhabarNo Comments
‘म त मान्छे सुध्रिएलान् भन्छु, मिठोमिठो शब्द मात्र निकालें’ – माधव नेपाल
नेकपा एमालेभित्रको विवादलाई लिएर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नरम अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेका बेला वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल कडा रुपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन्। प्रधानमन्त्रीबाट विस्थापित भएपछि बालुवाटारको सरकारी निवास छाडेर बालकोट पुगेका ओलीले समर्थकमाझ नेपाललाई पार्टीभित्र स्थान नभएको बताएका थिए। त्यसको एक सातापछि उनी ‘आममाफी’ दिने तहमा आइपुगेका छन्। यता सर्वोच्च अदालतले साउन २८ गते प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेपछि नेपाल पक्ष आफ्नो विचार, नीति र विधिको विजय भएको तर्क गर्दै ओलीले गल्ती स्वीकार गर्नुपर्ने अडानमा छ। ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टी विभाजन रोक्नुपर्ने आवाज मुखर भएपछि ओलीले नेपाल समूहप्रति लचिलो नीति लिएका थिए। उनले पार्टीभित्र देखिएको विद्रोह सम्बोधन गर्ने क्रममा सबै गल्ती कमजोरी माफी मिनाह भएको घोषणा गरेका थिए। ‘उहाँ ९ओली० ले पार्टी एकताकै लागि लचिलो नीति लिनुभएको
Jul212021 by News TeamNo Comments
झलनाथलाई प्रधानमन्त्रीले फोन गर्दै भने : ढुक्कसँग उपचार गर्नुस्, सबै खर्च सरकारले व्यहोर्छ
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उपचार खर्च सरकारको तर्फबाट बेहोर्ने बताउनुभएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निवास खुमलटारमा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले पूर्वप्रधानमन्त्री खनालसँग टेलिफोन वार्ताका क्रममा सो कुरा बताउनुभएको हो । अध्यक्ष दाहाल पत्नी सीताको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जानकारी लिन र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्न आज साँझ प्रधानमन्त्री देउवा खुमलटार आउनुभएको अध्यक्ष दाहालका प्रेसविज्ञ विष्णु सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । “अध्यक्ष प्रचण्डले पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको स्वास्थ्यका बारेमा चासो राख्दै फोन लगाउनुभएको थियो । सोही क्रममा प्रधानमन्त्री पनि यही हुनुहुन्छ भनेर अध्यक्षले भन्नुभयो । अध्यक्षको फोनबाटै प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने बताउनुभयो
Jul192021 by News TeamNo Comments
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्। देउवाले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको चार दिनमा प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका हुन्। देउवाले १६५ मत प्राप्त गरेका छन्। संसदमा उपस्थित २४९ मध्ये विपक्षमा ८३ र तठस्ठमा १ मत खसेकाे छ। आजको बैठकमा आफ्ना दलका साथै देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संस्थापन पक्षकै केही सांसदको समेत मत जित्न सफल भए। त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को दुवै समूहबाट देउवाले विश्वासको मत पाए। देउवाले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा नेकपा एमालेका २२ जना सांसदले उनको पक्षमा मतदान गरेका छन् । देउवाले प्रतिनिधिसभामा १६५ मत पाउँदा नेकपा एमालेका २२ सांसदले मत दिएका हुन् । मत दिनेमा माधव नेपाल पक्ष मात्र नभई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका सांसद पनि छन् । देउवालाई मत दिनमा माधवकुमार नेपाल, विरोध खतिवडा, जीवन
Jul182021 by Classic KhabarNo Comments
माधव नेपाल समुहमा नयाँ लफडा ! ‘देउवाको एमाले फुटाउने नियत देखियो’ भन्दै केहीले गरे विरोध, को को हुन् विश्वासको मत नदिने नेता ?
प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले नेकपा एमाले फुटाउने नियतले यति छिटै विश्वासको मत लिन लागेको भन्दै नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहमा विवाद देखिएको छ । आइतवार विश्वासको मत लिने देउवाको घोषणासंगै कोटेश्वरमा नेपाल पक्षका सांसदहरुको बैठक बसेको छ । बैठकमा विश्वासको मत दिने र नदिनेबारे छलफल भएको छ । छलफलमा केही नेताहरुले एमाले फुटाउने नियतले देउवाले यति छिटै विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको भन्दै देउवालाई विश्वासको मत दिन नहुने विचार आएका छन् । केही नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै संसद बचाउनकै लागि भएपनि देउवालाई विश्वासको मत दिनुपर्ने धारणा राखेको बेलामा केही नेताहरुले भने विरोध गरको हुन् । यसरी बैठकमा दुई मत आएपछि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने सन्दर्भमा सांसदहरूलाई स्वविवेक प्रयोग गर्न दिने छलफल भएको छ । कार्यदलमा रहेका नेताहरूले समूहले निर्णय गरेर शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिँदा पार्टी